oru na oru | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Udi: oru na oru
Onye Nlekọta Onye Ndu: Ọrụ na njiri mara
Onye inyeaka onwe ya onye isi - ọrụ a chọrọ ugbu a. Nke mbu, nke a jikọtara ya na mmepe nke akụ na ụba ahịa, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ nke asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ ọnọdụ ego nke ụlọ ọrụ ọ bụla na-adabere ...
Injinia na-ahụ maka njikwa ụlọ ọrụ: nkọwa ọrụ nke onye injinia nke sistemụ nchịkwa usoro akpaaka
Kedu ihe onye injinia usoro njikwa sistemụ na-eme? A ga-atụle nke a n'isiokwu a. Banyere ọrụ aka Olee otu ị ga - esi kọwaa ọrụ dị na mkpirikpi? Injinia na-ahụ maka njikwa ụlọ ọrụ bụ mmadụ ...
Onye njikwa ihe oriri: ibu ọrụ, ọrụ. Kedu otu esi elekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ?
Ihe na 15.09.2019 21.11.2019
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ isụ bụ ebe ndị mmadụ na-aga ezumike, ebe ha nwere ike izu ike, na-anwa nri gọọlfụ na-atọ ụtọ, gee egwu dị mma. Mana maka ụfọdụ, ụlọ nri bụ ọrụ. Onye isi ụlọ nri ahụ - ...
Onye na-ere ọhịa: ihe ndị a chọrọ, atụmatụ ọrụ
Osisi oke ohia bu oru nke nani ezigbo nwoke puru ime. Ọrụ a chọrọ ike anụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na ezigbo ọrụ ha. Ma ọ bụrụ na ụmụ okorobịa nwere ihe isi ike pụrụ iche na nke mbụ ...
Kedu ihe ị ga-eme ná ndụ? Olee otu esi eme nhọrọ ziri ezi?
Olee onye na-enwetụbeghị mbụ na-eche, sị: “willnye ga-abụ n'ọdịnihu? Kedu ọrụ ịhọrọ? " N’oge gara aga, ọ dị anyị ka ọ dịịrị nfe. Fọdụ kwuru na ha ga - abụ ndị na - esepụta ihe, ndị ọzọ - ndị dọkịta, ...
Nkọwa mmiri nke mmiri mmiri: nkọwa ọrụ, atụmatụ ọzụzụ na nyocha
Ike ikuku abụrụla otu mgbe ọrụ ndị achọrọ na mgbakwunye. Ọ bụ ya mere ọrụ nke ngwa eji eme mmiri ọgwụ mmiri dị ezigbo mkpa. A ga-akọwa ihe nzuzo niile na atụmatụ ọrụ a n'okpuru. Onye…
Na-arụ ọrụ na ndọta: nyocha na echiche
Emela ọsọ iji nweta ọrụ n’agaghị ihe ọ bụla banyere ya. Ọ dabara nke ọma, ugbu a ọ dị mfe karị ime nke a, n'ihi ịntanetị na ọchịchọ mmadụ ịkekọrịta iru újú ma ọ bụ 'ịtọgbọ' eziokwu ahụ. Yabụ dịka ọmụmaatụ…
Ọkachamara ọkwọ ụgbọala. Ọkachamara nkọwa, ụgwọ
Ọrụ maka ịkwọ ụgbọala bụ otu n'ime ihe ndị achọrọ n'ọtụtụ mba. Mmepe nke akụrụngwa nke njem na-abawanye ihe achọrọ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na àgwà ọkachamara ha. Nhọrọ nke ọrụ a pụtara ọ bụghị naanị na njikere ịchụso ...
Usoro mgbanwe ọrụ (ịgbanwee). "Stakhanov": nzaghachi banyere onye were gị n'ọrụ na-enye ọrụ mgbanwe
Ugbu a, mgbe ọ siri ike ịchọta ọrụ, ọtụtụ ndị ọkachamara na-enyocha ohere ọrụ ọzọ. Menmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere ume na ntachi obi nwere mmasị dị ukwuu na oghere ọrụ metụtara ọrụ ngbanwe. Ọnọdụ ndị…
Speleologist - onye bụ onye a? Gịnị ka onye nwere caver na-eme? Gini bu ihe omumu akwukwo?
Speleologist - onye bụ onye a? Ajuju yiri nke a na-ebilite n’etiti ọtụtụ mmadụ ndị nụrụ aha otu n’ime ọrụ egwu kachasị njọ ma baa uru. Ihe bụ na nke a abụghị ọrụ a kacha arụ, ezigbo ...
Ọrụ bụ… iszọ na ụzọ iji dọta ndị chọrọ iru eru maka ọnọdụ ahụ
Ntinye akwukwọ bu ihe eji egosi “ndeputa ego” nke sitere na Bekee American. Okwu a na-egosi usoro izugbe na-adọta, họrọ na ịnabata ndị chọrọ ọrụ maka ọrụ na-adịgide adịgide ma ọ bụ nwa oge ...
Ọrụ nnwale: “onye na-ebu”. Ọ bụghị na mfe…
Chọ ọrụ dị ka onye na-ebu ngwugwu ”- ụdị mgbasa ozi ndị a dị ụkọ n'ihi na enweghị ọrụ dị na aha a. Companieslọ ọrụ nri, ụfọdụ ụlọ nkwakọba ihe, na ụlọ mmepụta ihe ... chọrọ ndị na-eburu ngwongwo.
Govanọ bụ…. Ihe okwu a bu “ichi.” Gini bu oru nke ichi ime?
Mgbe ị gụrụ ma ọ bụ ịnụ okwu a "onye na-achị achị", mgbe ahụ onye ọ bụla nwere ezigbo mkpakọrịta ọ bụla. Amaghị m otú onye ọ bụla nwere ya, mana maka m, onye na-achị isi bụ ihe osise ederede nke Mary ...
Ọrụ agha na Russia
Site na mgbanwe ndị a na-eme n'oge gara aga n'ime ndị agha nke Russian Federation, ọrụ ndị agha na mba ahụ amụbawo nke ukwuu. Ugbu a ọrụ ndị agha abụghị naanị utu aha nsọpụrụ na ụgwọ ọrụ dị mma, kamakwa…
Ọrụ kachasị ọhụrụ 21 narị afọ. Ọrụ kachasị achọsi ike na 21 narị afọ
Gịnị kpatara ọrụ aka ọhụụ pụtara? N'ihi na a na-azụlite ókèala ọhụrụ ma n'uche nke okwu ahụ na n'ụzọ ihe atụ. Ndị mmadụ nwere mmasị na ihe dị iche kpamkpam, mepụta ebe ndị ọzọ maka okike na, ...
Executive Director. Ọrụ na ikike
A na-ahụwanye ọnọdụ nke onye isi ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche. Mgbe ị na-etinye akwụkwọ maka oghere a, ị kwesịrị ịma ọrụ na ikike onye ọrụ a nwere. Ọrụ nke Onye Isi Nchịkwa na-arụkọ ọrụ ...
Kedu ihe mere ịchọrọ onye nkuzi nwata akwụkwọ ọta akara maka Pọtụfoliyo?
Oge ụfọdụ gara aga, a na-agbaso ụkpụrụ ọhụụ maka asambodo nke ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara (DOE). Na mgbakwunye na akwụkwọ ndị na-egosi na irube isi ọkachamara dị n'ọnọdụ a, ọ dịkwa mkpa iji kwadebe edemede maka onye nkụzi ụlọ akwụkwọ ọta akara. Maka Pọtụfoliyo, nke a bụ…
Gịnị bụ ihe eji arụ ọrụ? Isi Nyocha Ọrụ
Gịnị bụ ihe eji arụ ọrụ? Ọ ga-adị ka ọ bụ ọrụ nkịtị, ọ nweghị ihe dị mgbagwoju anya. Ma ọ bara uru ntakịrị nghọta, ozugbo ọ bịara doo anya - ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịma ya. E kwuwerị, ọkachamara a na-ejide ...
Onye na-akwa akwa bụ nwoke nke ọrụ okike
Ọ bụghị ihe nzuzo na uwe ahụ na-anọdụ na ọnụọgụ ahụ ma ọ bụrụ na o jiri nghọta weezie ma kechie ya nke ọma. Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ịkwa mma na ateli. Na ihe di iche iche emechara, ichoro ihe mgbe niile.
Isnye bụ onye njikwa sistemụ? Mụta ọrụ aka
Yabụ, taa anyị ga-anwa ịza ajụjụ a: "Sysadmin - onye bụ onye a." Na mgbakwunye, anyị ga-achọpụta ego ole onye dị otú a na-erite, ihe ọ na-arụ, yana etu ọrụ ya si dị mma ma dị mkpa ugbu a ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,403.